Igwe anaghị agba nchara Cut Waya Hot - China Shanghai Bosun abrasive
Atụmatụ igwe anaghị agba nchara shot bụ ikuku na usoro nke ịbịaru, ọnwụ, na oyi wdg na na ọdịdị ìhè, erughị ala na * Tụkwasị chaplet (maka ịkpụ waya shot, cylinders). Ha na-n'ọtụtụ ebe maka n'elu nkwadebe site peening na ọgbụgba ọkụ na Ọla kọpa, Aluminium, Zinc na igwe anaghị agba nchara na-arụ ọrụ iberibe etc .. N'ihi ya ọrụ ike atụ ha metal agba na sub-ìhè mmetụta ma na-anwụ nēfe erughị ala mgbe nkwadebe. Ọ dịghị mkpa ido r ...
Igwe anaghị agba nchara shot bụ ikuku na usoro nke ịbịaru, ọnwụ, na oyi wdg na na ọdịdị ìhè, erughị ala na * Tụkwasị chaplet (maka ịkpụ waya shot, cylinders). Ha na-n'ọtụtụ ebe maka n'elu nkwadebe site peening na ọgbụgba ọkụ na Ọla kọpa, Aluminium, Zinc na igwe anaghị agba nchara na-arụ ọrụ iberibe etc .. N'ihi ya ọrụ ike atụ ha metal agba na sub-ìhè mmetụta ma na-anwụ nēfe erughị ala mgbe nkwadebe. Ọ dịghị mkpa ido nchara na-akpụ akpụ ọgwụgwọ site acid ihicha. E wezụga ha abrasion eguzogide bụ 3-5 okpukpu karịa nkedo anaghị agba nchara shot, otú mmepụta ike ga-egbutu.
igwe anaghị agba nchara gbaa na-a na-eji maka ọgbụgba ọkụ igwe na drum ụdị, yinye ụdị, na-eweli nko ụdị, crawler ụdị, rue ụdị, n'usoro table ụdị, ìgwè ụdị, eje ije ụdị na ụgbọ ala ụdị. Ọzọkwa nwere ike ji mee ihe maka gbara n'ume equipments, pretreatment nke mmepụta akara, na ájá ọgbụgba ọkụ ụlọ.
Anyị nwere ike mepụta kpara akpa nkwakọ, ton bag nkwakọ, osisi tree nkwakọ, plastic mbukota nkwakọ na dị ka dị ka ndị ahịa chọrọ
Max ndiiche ± 3.0HRC ma ọ bụ ± 40HV
Longitudinal (Ọbụna deformation austenitic ) kwụ( Ọbụna deformation austenitic )
PS: Anyị ụlọ ọrụ nwere ike dị ka ndị ahịa pụrụ iche chọrọ, enye ndị ọzọ chemical mejupụtara nke igwe anaghị agba nchara ogbugba.
ọ aku ikpe n'ihi na site na iji igwe anaghị ịkpụ waya shot na peening na gbawara nhicha arụmọrụ bụ nnọọ mfe ime. Cut waya anaghị mgbaji ọkpụkpụ ma ọ bụ mmebi n'oge eji n'ihi na ọ bụ a siri ike ibe. N'ihi ọtụtụ ihe ndị ziri ezi ime:
● igwe anaghị bee waya shot nwere a budata ogologo bara uru ndụ karịa nkedo ígwè shot ma ọ bụ grit na carbon ịkpụ waya shot
● Ájá ọgbọ budata ala otú ọgbụgba ọkụ arụmọrụ bụ ihe Cleaner
● igwe anaghị bee waya arụpụta nti utịp n'ihi na nke ya ime Otu na ike
● Ọ ga-eme ka ị na-a "greener" nzukọ n'ihi na mkpofu nọrọ media ga-budata belata (ị ga-adịghị mkpa ka ukwuu shot, yiri nkata chọrọ ga-ala na na-agbụ ibu obere)
● ị gaghị ịme ferrous ofufe na-abụghị ferrous oge ọgbụgba ma ọ bụ ọrụ akpọkwa dị ka emee na ihe nkedo ígwè ma ọ bụ carbon ịkpụ waya shot
Clean: ọgbụgba ọkụ ihicha; mgbali mgbatị ihicha; magnesium alloy, zinc alloy, aluminum alloy na ọla kọpa alloy mgbatị fettling; igwe anaghị agba nchara mgbatị ihicha; igwe anaghị agba nchara efere ihicha; igwe anaghị agba nchara ngwaahịa ihicha; Acha iberibe elu deburring na ọkụ nhazi, ọ nwere ike melite ike ọgwụgwụ na-eguzogide, mgbochi corrosion Njirimara na cover mgbatị n'elu ntụpọ, na-eme ka ngwaahịa elu mma.
Nditetịm: igwe anaghị agba nchara na-arụpụta-esiwanye ike; okpomọkụ-emeso iberibe elu-esiwanye ike;
Ọgbụgba ọkụ: magnesium alloy, zinc alloy, aluminum alloy and copper alloy cast blasting; stainless steel products blasting.
Next: Steel Cut Waya Shot
abrasive ọgbụgba ọkụ
abrasive ọgbụgba ọkụ Media